Sei Vatengesi Vanogona Kudzivirira Kurasikirwa Kubva Ku Showrooming | Martech Zone
Famba uchidzika nemugwagwa wechero chitinha-uye-dhaka chitoro uye mikana iripo, iwe uchaona mushopper nemaziso avo akakiyiwa pafoni yavo. Ivo vanogona kunge vachifananidza mitengo paAmazon, vachikumbira shamwari kurudziro, kana kutarisa kumusoro ruzivo nezve chimwe chigadzirwa, asi hapana mubvunzo kuti nhare mbozha dzave chikamu cheicho chiitiko chekutengesa. Muchokwadi, vanopfuura makumi mapfumbamwe muzana vevatengi vanoshandisa mafoni vachitenga.
Iko kusimuka kwemidziyo yenhare kwakatungamira mukubuda kwe showrooming, inova iyo shopper painotarisa chigadzirwa muchitoro asi ichiitenga online. Zvinoenderana nesarudzo yeHarris, dzinenge hafu yevatengi-46% - imba yekuratidza. Sezvo tsika iyi payakakura, yakatanga Njodzi nerima kufungidzira nezvekuti zvaizoparadza sei chitoro chemuviri.
Iyo yekuratidzira yekugeza apocalypse inogona kunge isati yaitika izvozvi, asi izvo hazvireve kuti vatengesi vepanyama havasi kurasikirwa bhizinesi kune vanokwikwidza. Vatengi havasi kuzomira kushandisa mafoni avo kuvabatsira pavanenge vachitenga. Vatengesi vanhasi mutengo unonzwisisa uye vanoda kuziva kuti vari kuwana zvakanakisa dhizaini. Panzvimbo pekuyedza kufuratira kana kurwisa nharembozha mu-chitoro (chinova chiitiko chisina maturo), vatengesi vanofanirwa kushandira kuona kuti kana shopper achishandisa nharembozha muchitoro, vanoshandisa iyo yega mutengesi app, pachinzvimbo chemumwe munhu .
Kugovera - Iyo Inayo Chitoro App Yakavakirwa Mutengo Kufananidza
Isu tinoziva nezve Showrooming uye inopesana nayo webrooming - uko shopper anowana chinhu online, asi pakupedzisira anochitenga muchitoro. Vaviri vanovimba shopper achiwana chinhu mune imwechete mamiriro asi achitenga mune yakasarudzika mamiriro. Asi ko kana vatengesi vakabata yavo app sekuwedzera kweimba yavo yekuratidzira uye kukurudzira vatengi kuti vaite neapp kana vari muchitoro. Sezvambotaurwa pamusoro apa, chikonzero chikuru icho shopper anozvipira mukushambadzira ndechekuona kana vachigona kuwana dhizaini iri nani kune anokwikwidza mutengesi kana kuwana basa riri nani. Vatengesi vanogona kudzivirira kurasikirwa nebhizinesi nekusanganisa iyo yemutengo kuenzanisa uye / kana mutengo unoenderana ficha mune yavo yega app, izvo zvinodzivirira vatengi kubva kutarisa kune imwe nzvimbo kuti vatenge - chero vane chiteshi chavanowana chigadzirwa.
Semuenzaniso, kuenzanisa kwemitengo inyaya hombe kune vatengesi vemagetsi. Vanhu vanoenda kuchitoro, vanowana TV yavanoda kutenga, vobva vatarisa kuAmazon kana kuCostco kuti vaone kana vachigona kuwana chibvumirano chiri nani pazviri. Izvo ivo vangangodaro vasingazive ndezvekuti mutengesi anogona zvakare kuve nemakoponi, zvinopihwa uye kuvimbika mibairo inowanikwa iyo ingatengese TV pazasi pemakwikwi, chinhu chinorasika kana uchishandisa makwikwi 'mabhurawuza maturusi. Pasina chero kupihwa kwakapihwa, mutengesi anogona zvakare kuve nemutengo wemutambo vimbiso, asi zvinoda shamwari kuti aone humbowo hwekuti chigadzirwa chinowanikwa nemutengo wakaderera kubva pamakwikwi, saka ivo vanofanirwa kuzadza mamwe mapepa kuitira kuti mutengo mutsva inogona kuratidzwa panguva yekutora usati wabvumira mutengi kutenga. Pane kukakavadzana kwakakura kunosanganisirwa, nekuti chingave mutengo unoenderana nemutengesi waangapa shopper chero zvodii. Nekushandisa iyo Retailer app kuti ishandise mutengo unoenderana, maitiro ese anogona kuitika mumasekondi - iye shopper anoshandisa iyo Retailer's App kuongorora chigadzirwa uye kuona mutengo wadzinopa kwavari mushure mekuzvienzanisa nevakwikwidzi vepamhepo, mutengo mutsva unowedzerwa otomatiki kune iyo shopper profil, uye vanozopihwa kwavari kana vapedza kubuda.
Kutaurirana kwakakosha apa. Kunyangwe kana mutengesi akapa mutengo wekuenzanisa mutengo, zvine mutsindo kana vatengi vasingazive nezvazvo. Mhando dzinofanirwa kuisa mari mukusimudzira kuziva nezvemaapplication avo 'mashandiro saka kana vatengi vane simba rekuratidzira, ivo Approom pachinzvimbo, uye gara mukati mecustomer ecosystem.
Kana vatengi vachinge vaunzwa munzvimbo inofamba, pamwe kuburikidza nekubudirira kwewebhu webhu, kune dzimwe nzira dzakawanda vatengesi vanogona kusangana navo. Unogona kukumbira vatengi kuti vaongorore zvinhu uye vagadzikise zvinhu zvemuchitoro chiitiko chekutenga. Kushamisika kwemitengo, mitengo yemitengo, uye zvinopihwa zvine simba zvinoenderana neiyo chaiyo shopper inoita kuti vatengi vafarire uye vabatikane.
Zvakare, kubatanidzwa kweapp kunopa vatengesi ruzivo rwakakura rwekuti vatengi vavo ndevapi. Fungidzira kuti mushandisi anouya muchitoro, anotarisa chinhu, uye otora mutengo wakasarudzika unoshanduka nenguva yezuva. Kuwanda kwevanhu vanoshandisa Anwendung kuongorora zvinhu, vanowedzera ruzivo vatengesi vanowana pane vatengi vavo. Uye vatengi havafanirwe kuita kutenga kuti vatarise. Ivo vanogona kuwana kutendeka mapoinzi, ayo anozo gadzira akateedzana echingwa zvimedu zvezvinhu mukati mechitoro. Vatengesi vanogona kushandisa iyo data kuti vanzwisise kuti zvinhu zvinopisa chii uye zvinotengwa nevatengi chaizvo. Kana paine chimwe chinhu chine yakaderera shanduko, mutengesi anogona kumhanya analytics kuziva kuti sei. Kana paine mutengo uri nani pamukwikwidzi, mutengesi anogona kushandisa ruzivo irworwo kudzikisa yavo mitengo, uye nekudaro vagare vachikwikwidza.
Imwe nzira vatengesi vanogona kudzivirira kurasikirwa kubva ku showrooming ndeyekusunga zvinhu. Zvinhu zviri muchitoro zvinogona kusunganidzwa nezvinhu zvisina kutakurwa muchitoro, asi izvo zvinozofamba zvakanaka nechinhu ichocho. Kana mumwe munhu akatenga dhirezi, sumbu rinogona kusanganisira shangu dzekubatanidza dzinowanikwa chete kubva kuchitoro chechitoro. Kana kana mumwe munhu akatenga shangu mbiri, svumbunuro yacho inogona kusanganisira masokisi - mamwe marudzi ayo anogona kugadziridzwa zvizere kune zvaanofarira mushopper, otumirwa kumba kwavo. Maapplication mukana wakakura wekugadzira akakosha mapakeji evatengi, uye mukuita kudaro, kwete chete kuwedzera kutengesa, asi zvakare kudzikisa mutengo nekudzikamisa maSKU anotakurwa muchitoro maringe nepakati pekuchengetera.
Uyezve, mabundles anogona kuwedzerwa kusanganisira emabhizinesi emuno uye vanobatirana avo vanopa zvakasarudzika zvigadzirwa nemasevhisi anoenda zvakanaka nezvinhu zvemutengesi. Funga nezve mutengesi wemitambo. Kana mutengi achiedza kutenga seti yemasikisi, iyo bundling ficha muapp inogona kubatsira kuvatungamira kuburikidza nesarudzo nzira nekukurudzira kuti ndedzipi mhando dzemateru skis akanakira uye kunyangwe kupa mapakeji evhiki rechikepe. Hwechitatu bato kudyidzana iyo inobvumidza kuti vatengesi vape pasuru dhizaini inogadzira yemakwikwi makwikwi ayo anobatsira zvakanyanya kune shopper pane kungotenga chinhu chimwe chete.
Iyo Omni-Channel Ngoro
Chekupedzisira, vatengesi vanogona kudzivirira kurasikirwa kwekuratidzira uye kusimudzira mabhenefiti kubva pakuuya nekugadzira iyo omnichannel ngoro. Chaizvoizvo, iyo iri-muchitoro panyama ngoro uye yepamhepo ngoro inofanirwa kuve imwe. Kufamba pakati pepamhepo uye pasiri pamhepo kunofanirwa kuve chiitiko chisina musono uye vatengi vanofanirwa kuve nesarudzo pamunwe wavo. Mazuva ano BOPIS (Tenga Pamhepo Kutora Muchitoro) hasha dzese. Asi ruzivo rwunotyoka kamwe muchitoro, sezvo iye mushopper angawana zvimwe zvinhu zvavanoda kutenga, asi ikozvino vanofanirwa kumira mumutsara kaviri kuti vatore zvinhu izvozvo. Sezvineiwo, ivo vanofanirwa kukwanisa kuenda kuWebroom nzira yavo kuenda kuBOPIS, vobva vauya kuchitoro vowana zvimwe zvinhu zvavanoda, vozviisa kungoro yavo yemuviri iyo inofambiswa neRetailer's App, vozopedzisa kubuda kweBOPIS neIn Chengetera zvinhu nekamwe chete, pane yakabatana Checkout station.
Mukuguma, Kwevatengi Zvakaitika Nyaya Zvakawanda
Chitoro chaicho chiri kuita chiitiko chayo-ingo tarisa kuti vangani online-vekutanga vatengesi vari kuvhura nzvimbo dzezvidhina nematope. Vatengesi vanoda kuona kubata, kunzwa, kutarisa, uye kunhuhwirira kwezvigadzirwa uye usatombo kunetseka nezve chiteshi. Kukwikwidzana nevatambi vepamhepo pamutengo mujaho wezasi. Kuchengeta bhizinesi ravo, vatengesi vanofanirwa kupa zvinomanikidza mu-chitoro uye zviitiko zvepamhepo zvinopa kukosha kwakaringana uye nyore izvo vatengi vasingaende kumwe kunhu.
Tags: app mitengoapp-based mitengoapproombundlingvatengi vanozivamutambo wezvitorosei kutimu-app mitengonokurasikirwaomni-chiteshi ngoroPricingchigadzirwa mitengochitoro chiitikoshowroomingshowrooming kurasikirwa
Ko Emoji muChinyorwa Chako Impact Email Vhura Mateti? ?